Vaovao - Fantatrao ve raha soloina ny efijery voalohany rehefa manamboatra ny findainao? Midira ary mampianara anao hamantatra ny tena efijery sy ny efijery sandoka
Fantatrao ve raha soloina ny efijery voalohany rehefa manamboatra ny finday? Midira ary mampianara anao hamantatra ny tena efijery sy ny efijery sandoka
Matetika, matetika isika no sendra ilay toe-javatra fa tapaka tampoka ny efijery finday, misy tranga sasany vakiny fitaratra, ny sasany kosa ny efijery anatiny tsy aseho dia vaky ihany koa. Ny mpanamboatra antoko fahatelo amin'ny ankapobeny dia hanontany anao raha tianao ilay voalohany na ilay mahazatra. Amin'ny ankapobeny, ny fahasamihafana eo amin'ny vidiny dia tsy lehibe, izay ny fitarihana anao hisolo ilay voalohany. Fa fantatrao ve raha ilay efijery nosoloiny no ilay voalohany? Ity mpampanonta kely manaraka ity dia mampianatra anao ny fomba hamantarana ny efijery marina sy diso.
Voalohany indrindra, hiresaka momba ny efijery ivelany tsotra isika. Araka ny efa nolazainay, ny efijery tany am-boalohany avy amin'ny mpanamboatra dia fivorian'ny efijery. Noho izany dia tsy dia fahita firy ireo antsoina hoe efijery ivelany tany am-boalohany. Ny mahasamihafa ny tany am-boalohany sy ny mahazatra amin'ny ankamaroan'ny orinasan-fikojakojana dia ny fahasamihafana misy eo amin'ny vera farany sy ny vera tsotra, ary vitsy ny efijery ivelany tena izy.
Amin'ny ankapobeny, ny efijery nosoloina masinina Android dia tena mahantra. Raha vantany vao tapaka dia tsara kokoa ihany koa. Ny fahaiza-manavaka dia ny manisy fiheverana ny fahalemen'ny radian 2.5D amin'ny sisin'ny efijery sy ny habetsaky ny sosona fanariana solika. Amin'ny ankapobeny, ny ampahany misy radian 2.5D amin'ny efijery ivelany mahantra dia tsy milamina ary malama loatra. Ny vidin'ity efijery ity dia eo anelanelan'ny 80 sy 90. Ny efijery tsara dia malama sy malama, matevina ny sosona solika, fa ny vidiny dia tsy hihoatra ny 300 yuan. Raha misy mpangataka mangataka anao hangataka RMB 4500, afaka miala eo noho eo ianao. Tsy ilaina ny manamboatra azy eto. Noho ny fangatahana lehibe sy ny rojom-panomezana tonga lafatra an'ny efijery ivelany an'i Apple, ny kalitaon'ny efijery ivelany dia tena tsara, na dia ampitahaina amin'ny efijery voalohany aza, ary ny vidiny dia tsy mihoatra ny 300 yuan.
Mbola maro ny efijery voalohany eo an-tsena ho an'ny fanangonana efijery, izay vita amin'ny fantsona manokana samihafa. Betsaka ny karazana efijery tsy tany am-boalohany, ao anatin'izany ny efijery fanerena aoriana miaraka amin'ny takelaka fisolo nosoloina, ny efijery LCD tany am-boalohany miaraka amin'ny tariby fisaka na backlight fisaka, efijery fakan-tahaka ambony, sns aorian'ny famakiana ireo karazana dia azonao atao ny miresaka mivantana ny fahaiza-manao.
Amin'izao fotoana izao dia telefaona finday maro no efijery OLED, izay mandany vola be. Mazava ho azy fa avo ihany koa ny vidin'ny fanovana ny écran. Na izany aza, be dia be ireo mpitrandraka lozabe izay tsy te hisolo ny efijery voalohany ho anao, fa manolo azy amin'ny LCD iray ihany ity efijery fitaovana mora vidy ity, satria ity dia azo lazaina ho manambola, ny efijery iray aza mety hahazo 500 na 600 yuan, ivelany tsy hita, raha sendra izany isika dia afaka maka vera fanamafisana hamantarana.
Ampifanaraho amin'ny efijery fotsy ny efijery tsy misy soratra na lamina araka izay tratra, ary jereo ny fandefasana piksely amin'ny efijery misy vera mampitombo. Tahaka ny andiany iPhone X sy ambony dia maro ny sainam-pianakaviana marobe no fanorenan'i Samsung pentale sub-pixel, toy ilay etsy ambony.
Huawei P30 pro sy ny vady 20 Pro dia fandaharana “Zhou Dongyu” an'ny BOE, ary ny fandaharana pentile mahazatra an'ny LG, araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambony,
Hafa mihitsy ny LCD fanoloana. Ny ankamaroan'izy ireo dia voalamina amin'ny fandaminana RGB mahazatra mahitsizoro. Araka ny aseho eo amin'ilay sary etsy ambony, raha hitanao fa ny efijery findainao dia efijery OLED tany am-boalohany ary nosoloin'ny LCD iray mpaka vola, dia azonao atao ny mampiasa an'io fomba io mba hankanesanao any aminy avy hatrany hamoizana vola.
Ny fomba iray hafa dia ny mamantatra raha original ny efijery ivelany amin'ity fivoriambe ity, toy ny fomba etsy ambony ihany. Ankoatr'izay, ny efijery dia tsy mety ho avo kokoa noho ny sisintany aorian'ny fanovana ny écran. Amin'ny ankapobeny, ny fivorian'ny efijery izay tsy ilay tena izy dia ho matevina kokoa noho ilay voalohany. Ka hisy ny fisandratana.
Ity ambony ity no fomba hanonerana anao. Manantena aho fa hanampy anao izany.